Olona khetho lufanelekileyo lweenoveli zembali
Uphengululo lwamva lenoveli
Iincwadi ezi-5 ezilungileyo nguMatilde Asensi
Oyena mbhali uthengisa kakhulu ngokugqwesa eSpain nguMatilde Asensi. Amazwi amatsha nanamandla afana nala Dolores Redondo Basondela kule ndawo yembeko yombhali we-Alicante, kodwa basenendlela ende ekufuneka beyihambile. Kumsebenzi wakhe omde, urhwebo kunye nenani labafundi bakhe ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaRobert Graves
Njengomphumo wokufunda incwadi ethi The Sixteen Trees of the Somme, ebhalwe nguLarss Mytting, ndaye ndavusa inxaxheba kaRobert Graves omkhulu kumlo owawusenzeka kula mmandla wase-France weSomme, apho amajoni angaphezu kwesigidi aswelekayo kwaye eyeyakho…
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaJavier Negrete
Ukubhala ngolwazi lwezibakala malunga nezinto ezihlala zibangela ukunconywa phakathi kwabafundi, njengoko kunjalo ngohlobo lwembali yentsomi, sele inika igunya kunye nesisombululo kumbandela obaliswayo. Kwaye Javier Negrete, ophumelele kwiClassical Philology, uthatha ithuba lakhe ...
Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo nguBernard Cornwell
Inkedama yabazali bobabini besebancinci kakhulu, uBernard Cornwell kunokuthiwa ngumzekelo wombhali ozenzileyo. Nangona iluncedo ngakumbi kunokuqwalaselwa kwezothando. Inyani yile yokuba waba ngumbhali ngenxa yesidingo emva kokuba efudukele eUnited States, ebeka ikamva lakhe ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaHilary Mantel
Emva kokuthandabuza ukuqala koncwadi phakathi kweentlobo ezahlukileyo njengeyintsomi kunye nembali yothando lwangoku (olo hlobo lweengxelo ezipinki), uHilary Mantel sele engumbhali odibeneyo wembali. Ngaphantsi kwesambrela solu hlobo, ikwazile ukuphumelela amabhaso amabini amatyeli amabini ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zeSantiago Posteguillo
Mhlawumbi oyena mbhali wokuqala waseSpain weenoveli zembali nguSantiago Posteguillo. Kwiincwadi zakhe sifumana ingxelo engembali emsulwa kodwa singasonwabela nesindululo esidlulela ngaphaya kwezibakala zembali ukuphanda ngembali yengcinga okanye ubugcisa okanye uncwadi. Nentsusa ...
Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo nguJosé Luis Corral
Xa umbhali-mbali ethatha isigqibo sokubhala iinoveli zembali, iimpikiswano ziya kufikelela kubunzulu. Le yimeko kaJosé Luis Corral, umbhali waseAragonese ozinikezela kakhulu kuhlobo lweentsomi zembali, eyitshintsha kunye nokushicilela okufundisayo njengomphengululi olungileyo kwingingqi yakhe. Okusingqongileyo…
Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo ngu-Umberto Eco
Kuphela sisidimokhrasi esiqhubekayo esinokubhala iinoveli ezimbini ezinjengeFoucault's Pendulum okanye Isiqithi Sosuku Olungaphambi kwaye singatshabalali kumzamo. U-Umberto Eco wayesazi kakhulu malunga nonxibelelwano kunye neesimbali kwimbali yoluntu, kangangokuba wagqibela ngokuchitha ubulumko naphi na kwezi ...
Abazali abakude, nguMarina Jarre
Kwakukho ixesha apho i-Yurophu yayililizwe elingonwabanga ukuzalwa kulo, apho abantwana beza emhlabeni phakathi kwempumlo, ukuncothula iingcambu, ukwahlukana nokuba noloyiko lwabazali. Namhlanje lo mbandela utshintshele kwezinye iindawo zomhlaba. Umbuzo kukuthatha olo luvo ...
Hildegarda, ngu-Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Ubuntu bukaHildegarda busazisa kwindawo enembali yelivo. Kuphela apho kukho iintsomi zabangcwele kunye namagqwirha anokuhlala ngokufanayo kwimihla yethu. Kungenxa yokuba namhlanje ummangaliso wokubuyisela indoda engaboniyo inobuqhetseba obufanayo nopelo olunokwazi ...
Umthetho weengcuka, nguStefano de Bellis
Kuya kuba kuLuperca, uhlobo lwengcuka eyayincancisa uRomulus noRemus. Inqaku lelokuba ilivo elingenakuphikiswa lingena ngokugqibeleleyo kwinxalenye yombono woBukhosi baseRoma njengenkcubeko engenakulinganiswa kodwa ehleliweyo, enomnqweno wokuphila kwanokuqhubeka. Kuba bekungekho enye impucuko ...